KMF/Cnoe : “Ny fanajana lalàmpanorenana no zava-dehibe fa tsy fanovana” | NewsMada
KMF/Cnoe : “Ny fanajana lalàmpanorenana no zava-dehibe fa tsy fanovana”
Mbola mahabe adihevitra ny fikasan’ny fitondrana hanitsy ny lalàmpanorenana. Ny fanajana lalàmpanorenana no zava-dehibe fa tsy fanovana, raha ny fijerin’ny KMF/Cnoe.
“Ho anay, azo atao sy tokony hatao ary tsy maintsy atao ny fanitsiana ny lalàmpanorenana amin’ny fotoana ilàna izany. Nefa mahita izahay fa ny fampiharana sy ny fanajana ny lalàna rehetra no zava-dehibe, fa tsy ny fanovaovana lalàna.”
Izay ny tenin’ny filoha nasionaly vaovaon’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, teny amin’ny foibe toerana, Antanimena, omaly, tamin’ny fampahafantarana ny birao vaovao. Na ovana injato na inarivo aza ny lalàna, tsy hahita tonga lafatra na aiza na iza. Tokony hohajaina izay misy. Izay fanajana lalàna izay no tany tan-dalàna.
“Raha hanova lalàmpanorenana isika, nefa tsy hohajaina: inona ny anton’ny fanovana?”, hoy izy. Tsy ilaina sady mety hampidi-doza ny fitsapan-kevi-bahoaka. Nambaran’ny KMF/Cnoe tamin’ny 2010, fa tsy tsara io lalàmpanorenana io. “Koa na tsy nety taminay aza ny lalàmpanorenana izay nolanina tamin’ny taona 2010, nitaona ny olona hanaja izany rehefa lany izahay”, hoy ihany izy.
Mila ajanona ny kajikajy politika
Miantso sy mitaky amin’ireo nametrahan’ny olom-pirenena andraikitra amin’ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao ny KMF/Cnoe. Anisan’izany ny olom-boafidy, olom-boatendry, firaisamonina sivily… Mila manamafy ny fandraisana andraikitry ny tsirairay, ary takina ny hanajanonana tanteraka ny kajikajy politika mialoha.
Lasa teraka ny ahiahy rehefa mandre mpanao politika, mpanohitra na mpomba ny fitondrana, miteny hoe hanao fifidianana mialoha ny fotoana na fanemorana fifidianana. Misy kajikajy politika ve ao anatin’izao toe-draharaha izao, mahatonga ny olona hiteny toy izany?
“Ny fanasoavana ny firenena amin’ny alalan’ny fandraisana andraikitra no hahazoana mahomby sy mivoatra haingana kokoa”, hoy izy. Hisy ny fanangonan-tsonia hanamafisana izay antso fanairana izay.
Ny birao vaovao
Nanao fifidianana anatiny ny KMF/Cnoe. Tapitra tamin’ny 2015 ny fe-potoam-piasan’ny birao nasionaly teo aloha, izay nisian’ny fitantanana vonjimaika na tetezamita.
Filoha nasionaly àry Andriamalazaray Andoniaina; filoha lefitra dimy: Rakotomalala Herman, Ravalison Olivier, Tokiniana Elibin, Ratsimbazafy Emée, Lohasana Isabelle; sekretera jeneraly nasionaly, Rambeloson Hery Clement; mpanara-maso anatiny nasionaly, Feno Assina.